झरनासँग फूलबारी पराजित – Khel Dainik
झरनासँग फूलबारी पराजित
प्रथम भू.पू. सैनिक कप नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा झरना स्पोर्टस् क्लब, कुञ्जलापुरले जित हात पार्दै क्वार्टरफाइनल प्रवेश गरेको छ ।
जित हात पार्ने क्रममा मंगलबार सम्पन्न खेलमा झरनाले फूलबारी गाईजलाई शून्यकाविरुद्ध २ गोलले पराजित गरेको छ । खेलमा झरनाले पहिलो हाफमै दुई गोलको अग्रता लिएको थियो । जुन अग्रता झरनाको जितका लागि निर्णायक बन्न पुग्यो । झरनाका लागि संगम थापा र बिनोद रानाले एक–एक गोल गरे ।
त्यस्तै मंगलबारको खेलमा झरनाका रितेश थापाले रातो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिनु परेको थियो । दोस्रो हाफमा दश खेलाडीमा सिमित झरनाविरुद्ध फूलबारीले आक्रमक प्रदर्शन गरे पनि गोल गर्न नसक्दा पराजय बेहोर्नुप¥यो ।
मंगलबारको खेलमा फूलबारी गाईजका अनुप गुरुङ्ग म्यान अफ दि म्याच घोषित भए ।
प्रतियोगिता अन्तरगत चैत्र २३ गते बुधबारको खेल आयोजक भू.पू. सैनिक जवई स्र्पोटिङ्ग क्लब र न्यू वर्मा युवा क्लबबीच हुने आयोजक क्लबका अध्यक्ष गोपीराम पुनले जानकारी दिनुभयो ।
← रोहित चन्द स्मार्ट सेलको ब्रान्ड राजदूत नियुक्त पुलिस र आर्मी आज भिड्दै →
महिला लिग छनौटको पहिलो दिन नै गोलको बर्षा चैत्र २३, २०७३
गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस ९ गते देखि चैत्र २३, २०७३
बिदाई कार्यक्रममा खेलाडी नआएपछि… चैत्र २३, २०७३
मनाङले ल्यायो पोर्चुगिज खेलाडी चैत्र २३, २०७३
अझै सुध्रिएन नेपालको फिफा वरियता चैत्र २३, २०७३
प्रशिक्षक अब्दुलाको सम्झौता नवीकरण हुने सम्भावना बलियो चैत्र २३, २०७३